Topic:Poverty Alleviation asaBusiness
အားဖြင့် Posted: မေလ Anokuru မတ်လ 14, 2012
မေးခွန်း: Having gone through many of your articles, in the newspapers and online, on this new concept of BoP marketing and markets for poor, can I therefore assume that BoP is poverty alleviation asabusiness, with another name? – Niyi Obasa
Considering the Bottom of the pyramid (BoP) marketing having bearing on markets for poor, being made up of business models which benefit likely initiators (the multinational companies or small private sector enterprises) ဆင်းရဲသား (sometimes customer, through havingamicro-enterprise), it is clear that ‘business’ is right at the centre of this aspect of alleviating poverty. Indeed, it’sawin-win situation for all parties – The initiators of the related business models benefit from achieving positive impacts (through products, services or technologies offerings), as the poor (the rural small farmer, in most cases) earns incomes that help him out of the $1 per day category.
In BoP, since the focus is on the creatingamarket for products, services or technologies which are useful to the poor, in order to allow them get out of the poverty trap, tell me what else qualifies more asabusiness? Just as it is often the case that any business requires pre-conditions before ‘launching’ into the market, some pre-conditions also apply for any venture that prefers to haveashot at BoP – (တစ်ဦး) The capacity to consume must be there, နှင့် (ခ) Products, services or technologies to be introduced into the market for poor have to be fashioned to suit the financial capabilities and lifestyles of the targeted consumers (the poor).
The well known4Ps of marketing also apply in this form of business aimed at alleviating poverty. product - အဘယ်အရာကိုဘဏ္ဍာရေးလဲလှယ်ပေးလျက်ရှိသည်, in this business relationship with those at the 4th tier [(e.g. product, ရေပေးဝေရေးအတွက်အ point-of-သုံးစွဲမှုစနစ်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသို့မဟုတ်နည်းပညာ; ကျန်းမာသန်စွမ်းအစားအသောက်ထုတ်ကုန်; Micro-ဘဏ္ဍာရေးသို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းငွေလွှဲလုပ်ငန်းစနစ်; အိမ်ရာ; နှင့်စွမ်းအင် (off-ဇယားကွက် power supply)].
Price – What it costs, mainly in monetary and real terms. Just like elsewhere, also in BoP, when the price is out of reach, the poor steers clear and this likely amounts to no sales. When too low, no profit for private sector operator. Here, sensitivity to prices as linked to quality applies, as the BoP consumer also deserves the best quality. In markets for poor, cash is suchaprecious good that the poor often buys in very small quantities (although consumers most times end up paying more on the long run). အဘယ်အရာကိုဒီဈေးကွက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်အလွန်သေးငယ်ယူနစ်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးရန်ဖြစ်သည် (e.g. ထိုအစိတ်အပိုင်းအားဖြင့်စီးကရက်ရောင်းရွာလက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်, ကို 'အထုပ်' နဲ့ချွတ်ဆေး, နှင့်ဖန်ခွက်သို့မဟုတ်ခွက်ဖလားကိုအားဖြင့်အချိုရည်).
Place – Where the product can be bought in this market makes for involvement of dealers sometimes, ကောင်းတစ်ဦးထောက်ပံ့ရေးကိုယ်တိုင်ကဆက်ထိန်းဖို့အမြတ်အစွန်း entails ကြောင်း channel နှင့်ထိရောက်မှုနှင့်အတူ. အများစုမှာကြိမ်, dealers even provide additional services to the customer (e.g. အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်, and even provide credit to their customers, as those in the village are well known).
Promotion – Products for BoP markets require rigorous promotion and marke­ting efforts, to make them known, အကျိုးအမြတ်ကိုသူတို့ထောက်ပံ့နိုင်သောပေးအပ်ခြင်းရုပ်သံလိုင်းအတွင်း. ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နေပြီးတခါတရံရှည်ရှည်မြှင့်တင်ရေးကိုမကြာခဏကြောင့်ဆင်းရဲသားများအတွက်စျေးကွက်၏ကွန်ဆာဗေးတစ်သဘာဝပေးရန်လိုအပ်သည်. ကျေးလက်ဒေသဖောက်သည်, အများဆုံးကြိမ်, ထိုသူတို့သည်ဆီဝယ်ချင်တဲ့အရာကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်. ဆန္ဒပြပွဲ BoP စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အရေးကြီးသော tool ကိုသရုပ်ဖော်သည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်.
မှတ်ချက်ပေးရန်ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ် အပေါ် "Poverty Alleviation asaBusiness"